Misintona sary amin'ny sary tsary YouTube - Tohanana ny ankamaroan'ny tranonkala
Misintona sary amin'ny sary tsary YouTube
❤ Ampidino ny sary ankafizin'ny sary rehetra amin'ny YouTube Video miaraka amin'ity fitaovana tsotra ity.
Raha te-hiditra ny pejin'ny horonan-tsary ao amin'ny YouTube Video ampidiro ny URL mahazatra amin'ilay horonan-tsary ao anaty boaty eto ambany.
⚠ Tokony hitovy amin'izany ny URL-nao:
Makà rakitsary YouTube
Ity tranonkala ity dia ahafahanao misintona tsotsotra misy lahatsary YouTube amin'ny alàlan'ny fampidirana ny URL URL.
⚠ Manana bokotra vaovao ny bokotra bokotra. Hanavao izao.
⚠ Ny tambajotra sosialy sasany dia mila mamerina mamerina ilay pejy hitanareo amin'izao fotoana izao mba hahazoana ankafizinao marina.
✚ Ampio ny Soso-kevitra
❝Ampitomboy ny hevitra momba ny horonantsary amin'ny alàlan'ny soso-kevitra❞
☀ Ny fanamoriana Miniana dia manohana ny fisintonana ny rantsan-tànana Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, DailyMotion, Vimeo, Tumblr, Imgur, Liveleak, TED, Mashable, 9gag, Break, Soundcloud, Flickr, ESPN, IMDB, Buzzfeed, Okru, Metacafe, WorldStarHipHop sy ny maro hafa. ☁
Fa maninona no misafidy ity fitaovana mahafinaritra ity?
Haingana sy maimaim-poana tsy tezitra
Tohanana ny ankamaroan'ny tranonkala
❮ Teo aloha
❝Ny lisitra sary dia voatahiry ao amin'ny fitaovanao ihany❞
♻ Mazava ny tantara
Jereo ny Soso-kevitra
Kitiho ny bokotra Soso-kevitra hahitana ireo hevitra tsara.
Raha mampiasa Mac OS X
Manintona Youtube Poster
Alao ny sary kely YouTube amin'ny fisehoana iray.
Hahazo rakitsary 2.0 ← Tsindrio izany amin'ny bara tsoratadidy
❝Ity script ity dia afaka maka sary amin'ny sary amin'ny tranokala rehetra.❞
Ahoana ny fampiasana YouTube Generator Image Generator
dingana 1 : Ampidiro ny URL YouTube
Mandika sy mametaka ny URL video YouTube amin'ny sehatra nomena.
dingana 2 : Tsindrio ❝Makà rakitsary YouTube❞
Raha te-hijery sy handefa ny sary kely sary YouTube, tsindrio ny bokotra Orange
dingana 3 : Makà sary tsary mirakitra horonantsary YouTube
Misintona sary amin'ny sary kely avy amin'ny YouTube amin'ny kalitao sy habe marobe
Free YouTube Diary Downloader
Hizaha lalana alohan'ny download
Rehefa tsindrio ny bokotra Manolotra aorian'ny fandefasana ny URL amin'ny horonan-tsary dia misy ny fijerena sary rehetra misy sary kely. Azonao atao ny manamarina ny haben'ny sary kely ankindro ary tsindrio ny bokotra Download mba hamonjy ireo Thumbnails of YouTube Video tsirairay avy amin'ny fitaovanao.
Fidio ny haben'ny sary tsara indrindra anananao
Makà sary amin'ny sary amin'ny horonantsary YouTube amin'ny habe samihafa arak'izay tianao. Rehefa afaka manindry ny bokotra Extract ianao, omena ny sary kely sary eo amin'ny habe maro. Azonao atao ny misafidy habe ankihinana eo anelanelan'ny 480x360, 120x90, 320x180, 1280x720 ary misintona azy.
YouTube Mini Image Image Extractor dia serivisy an-tserasera izay ahafahanao mijery sy misintona sary amin'ny sary amin'ny sary YouTube amin'ny HD. Azonao atao ny mahazo sary Miniary avy amin'ny YouTube amin'ny sehatra iray tianao indrindra toy ny fitaovana Windows, Linux OS, milina Mac, Android na iPhone.
Miaraka amin'ny fetra Zero
Izany dia serivisy maimaim-poana amin'ny serivisy an-tserasera mba hanavotana ny sary amin'ny sary diary YouTube. Mila miditra rohy ianao ary Raiso am-pikarohana sary ao amin'ny YouTube Video ao anatin'ny minitra vitsy. Ankoatra izany, ny serivisy dia tsy misy fetra ihany koa. Izy io dia fampiharana rehetra mifototra amin'ny navigateur ary afaka miditra amin'ny sehatra na fitaovana rehetra.
Jereo eto ny fanontanianao sy ny valinteninao - Ahoana ny fomba hisintonana ny horonantsary YouTube?
+ Inona ny thumbnail?
Ampiharina amin'ny pejin-tranonkala ho toy ny dika mitovy sy kely kokoa amin'ilay sary tany am-boalohany ny rantsankazo, amin'ny ampahany satria ny tanjona iray amin'ny sary ankohonana iray amin'ny pejy web dia ny hampihenana ny bandwidth sy ny fotoana fisintomana.
Ny mpamorona tranonkala sasantsasany dia mamorona rantsantanana misy HTML na alefan'ireo mpanjifa izay mahatonga ny mpizin'ny mpampiasa hampihena ilay sary fa tsy hampiasa sary kely kokoa.
+ Azoko alaina ve ny sary ao amin'ny YouTube amin'ny horonantsary amin'ny fanapahan-kevitra avo lenta?
Eny, azonao alaina mora sy misintona ny ankaviana amin'ny lahatsary YouTube amin'ny alàlan'ny fampiasana ity serivisy downloader ity.
Araho tsotra fotsiny ireto dingana eto ambany ireto hahazoana sary amin'ny sary mihetsika amin'ny horonantsary YouTube:
Sokafy ny pejin-tranonkala Downloader lahatsary YouTube.
Tsidiho ny YouTube.com ary adikao ny rohy YouTube Video
Apetaho ao anaty boaty miditra amin'ny YouTube Link Link.
Kitiho ny bokotra Extract hividianana haingana ny ankavanan'ny horonantsary.
Ny Downloader Video Mini Video Downloader dia hampiseho haingana ny Toro-bolan'ny YouTube nalaina avy amin'ny Videoo.
Azonao atao mora ny mijery ny sary rehetra ny Tsia ary jereo ny Sides amin'ny Pixels.
Raha mila misintona ianao, dia afaka misintona Thumbnails YouTube misy koa ianao amin'ny fipihana bokotra Download.
Ankafizo ny alàlan'ny fakana horonantsary.
Mila manao mihoatra noho ny dingana tsotra ianao hamonjy ny sary tsary Video an'ny YouTube.
+ Inona ny haben'ny sary amin'ny YouTube?
Hita ny toetra rantsan-tsarimihetsika Youtube amin'ny endriny efatra sy ny refy efatra samihafa: SD 640 x 480, MQ 320 x 180, HQ 480 x 360, HD 1920 x 1080.
Azonao atao ny mampiditra sary sary ankehitri-pohy amin'ny YouTube amin'ny endrika mahazatra. Mila ID ID miavaka fotsiny ianao, izay azo jerena amin'ny URL misy lahatsary.
Format sary ambany sary: http://img.YouTube.com/vi/video_id/FILE_NAME.jpg
Azonao atao ny mamaritra ny anaran'ny rakitra miankina amin'ny haben'ny sary kely tianao. Ny sasany amin'ireo mahazatra ampiasaina dia voasoratra eto ambany:
http://img.YouTube.com/vi/video_id/0.jpg – Habe feno
http://img.YouTube.com/vi/video_id/default.jpg – Habe feno
http://img.YouTube.com/vi/video_id/maxresdefault.jpg – Fanapahan-kevitra avo lenta
+ Inona no tanjon'ny YouTube Mini Grabber na Generator?
Ny hevi-dehibe ao amin'ity YouTube Mini Maker Maker dia ny ahafahanao misintona & Mahazo an-tsary ny sary tsary YouTube amin'ny sary misy habe amin'ny habaka rehetra. Ireo sary rehetra ireo dia tena manampy amin'ny asa fanampiny toa ny fanaovana bilaogy, ny famolavolana na ny fizarana izany amin'ny hafa.
+ Inona avy ireo safidy habeny hanalana na mamorona efijery fanaparitahana horonantsary?
Ity horonantsary YouTube tsary Extractor ity dia manome safidy efatra lehibe samihafa eo am-panavotana ny efijery:
+ Inona ny habetsaky ny pejin'ny YouTube 2019?
Tokony ho lehibe araka izay azo atao ny sary amin'ny sary ankamantatra ao amin'ny Youtube, satria ny sary dia ampiasaina ihany koa ho toy ny sarin'ny sary eo amin'ny mpilalao nalaina. Ny Youtube dia manoro hevitra ny ankavitrianao mahazatra: Manisy fanandramana amin'ny 1280x720 (miaraka amin'ny halavam-peo 640 ambany).
+ Ahoana no ataoko sary ao amin'ny sary mihetsika?
Atsaharo kely ilay video amin'ny toerana tianao hanananao sary, ampiasao ny Screen Screen na Snipping Tool hahazoana ilay sary.
+ Fomba ahoana no ahitanao ny sary mivoaka amin'ny YouTube?
Apetaho ao anaty boaty ambony ny url Youtube anao mba hahazoana ny ankabeazany.
+ Manao ahoana ny haben'ny sary rakotra ao amin'ny YouTube?
Saripika YouTube / Sarin'ny Channel: 2560 x 1440 pixels.
YouTube dia handrefesana ny sangan'asan'ny fantsona anao amin'ny alàlan'ny famolavolana tranonkala mandray andraikitra. YouTube dia nanoro hevitra ny fandefasana ny zavakanto fantsom-pivarotana 2560 x 1440 pika miaraka amin'ny haben'ny rakitra 2MB.
+ Ahoana no fomba hahitako ny kaody «embed» »ho an'ny pejin-kaody YouTube?
Tena misy mora ny mamerina ny sary kely sary ao amin'ny YouTube ho an'ny horonantsary manokana.
Mandehana fotsiny amin'ny URL manaraka: http://i1.ytimg.com/vi/Your-video-id/hqdefault.jpg
Ankehitriny, mila maka ny id video ianao na avy amin'ny horonan-tsary Url na avy amin'ny fehezan-dalàna misy ny horonantsary YouTube.
+ Ahoana no fomba andikana ny sary ao amin'ny Youtube?
Raiso amin'ny id ny youtube anao ary apetaho ao amin'ny boaty ambony, tsindrio ny bokotra ❝Makà rakitsary YouTube❞.
+ Inona no URL lahatsary Youtube mety?
+ Ahoana no fomba hisintonana thumbnail 1080p?
1280x720 ny farany indrindra amin'ny famoahana horonantsary Youtube.
1080p ny rantsan-tanana tsy misy.
Tokony hampiasa ny fitambaran-lakile fanontana fitifirana ianao hahazoana sary.
Ny modely sasany dia afaka manoratra ny lakilasy fanalahidy milamina PrtScn, Prnt Scrn, Print Scr.
Raha mampiasa Mac OS X, Press Shift + ⌘ + 3
+ Milamina ve ny fampiasana ity serivisin'ny download thumbnail YouTube ity?
Ny fiarovana no laharam-pahamehana indrindra eto amintsika, noho izany ny fifamoivoizana amin'ny angonin'ity tranokala ity dia voahodina SSL. Miaraka amin'ity protocol tambajotra azo antoka ity, voaaro amin'ny fidiran'ny ankolafy ny angon-drakitrao. Ny fisintonana ireo tena sary kely mivaingana izay mandeha amin'ny alàlan'ny fampifandraisana mivantana amin'ireo mpizara YouTube.
Ampio ny bokotra Play amin'ny sary an-tserasera
Makà sary Screenshot amin'ny YouTube amin'ny Internet
Makà fakantsary avy amin'ny toerana misy anao
Tehirizo ny dikanteny amin'ny Youtube
Download ny mpanampy
Hanampy anao hampidina horonan-tsary sy audio haingana amin'ny tranokala rehetra (anisany Youtube)
Mpampita famandrihana YouTube
Fandokoana loko ho an'ny YouTube
Mifehy amin'ny Youtube
Afeno ny fanehoan-kevitra YouTube
Radio mode ho an'ny YouTube
Equalizer sy Amplifier ho an'ny YouTube
Top Vaovao Vaovao
Ahoana no hanampian'ny thumbnail fomba Youtube anao hahazo fijery bebe kokoa
Mitady ny ankafizin'ny YouTube tsara indrindra? Te hahita fitaomam-panahy hanangana famolavola ankafizinao manokana ianao? Ianao no tena mety!
Ny famoronana rantsan-tanana manokana dia tsy fomba tsara hanandratana ny marinao mihitsy amin'ny ankapobeny fa fomba iray hanentanana ny mpijery hisafidy ny horonantsary amin'ny safidy rehetra azo atao. Tsia, ny pejin-tsofina mahazatra dia tsy hanatsara ny votoatinao raha toa ka zava-dehibe ny hifantohana amin'ny famoronana votoaty kalitao - fa ny tsipika kely dia hanampy ny votoaty mahavariana anao hahatsikaritra!
Namorona ankavonana lehibe ho an'ny horonan-tsary YouTube
Tahaka ny voalaza etsy ambony dia tianao ny marika moto ary marihana. Misy fika mahazatra vitsivitsy hitanay tao anatin'ireo ankavonana YouTube eto ambany.
Zava-misy ao amin'ny Kilonga voalohany na lohahevitra
Teny kely indrindra
Ho fanampin'ireto toetran'ireto etsy ambony ireto, mazava fa ny famoronana sary namboarina na sary saron-tava, ny lohahevitra voalohany dia safidy famolavolana malaza ho an'ireo manana fotoana, vola, mpiasa, na fahaizana ilaina hisintonana azy.
Izay mahatonga ny tsitoha amin'ny YouTube ho zava-dehibe
Ny famolavolana sary ho an'ny YouTube dia tsy mitovy amin'ny famolavolana tambajotra sosialy na ny famoronana sary dokam-barotra amin'ny tranonkala. Nahoana? Satria ny marinao dia tsy maintsy hifaninana amin'ny marika marobe hafa.
Ny tsipika kely, dia ny singa izay manintona indrindra indrindra fa tsy mijery mivantana azy io.
Ny vaovao tsara indrindra dia ny miverimberina miverina amin'ny horonan-tsary misy ao amin'ny tranombokinao, ary manavao ny ankaviana amin'ny ho avy raha tsy mivadika ny tsimokaranao YouTube.
Ireo marika fanampiny miaraka amin'ny ankiby tsotra
Tsy ny marika rehetra no mivoaka mamorona amin'ny famoronana sary ho an'ny YouTube. Raha ny marina, ny ankamaroan'ny fantsona dia tsy nanao na inona na inona mihitsy - tsy nofinin-dry zareo akory aza ny sary manintona mahavariana.
Famoronana endri-tsary YouTube anao
Ny zavatra tokony hodinihina dia ny haben'ny volavolanao. Raha lazaina amin'ny teny hafa, hanohy famolavolana bebe kokoa ve ianao, izay mitaky fanovana ny fiaviana, ny soratra ary ny loko fotsiny ve sa hanohy famolavolana mitaky ilana mpaka sary matihanina hamorona endrika vaovao ianao?
Ny drafitra NBA dia ohatra tsara amin'ny volavolam-panamboarana mora varina. Izay rehetra manana fahaiza-manao fototra dia afaka mamorona tempana vaovao misy atiny vaovao havaozina.
Ahoana ny fomba anaovanao ny pejinao YouTube?
Tena tsy olana izany. Raha hainao ny mampiasa ny Photoshop dia afaka manamboatra tsipika kely misy viriosy ho an'ny horonan-tsary ianao na azonao atao ny mampiasa thumbnail YouTube YouTube sy temps Photoshop.
Ny sarin'ny pejin-kaontinao manokana dia tokony ho lehibe araka izay azo atao, satria ny sary dia hampiasaina ho toy ny sary eo amin'ny sary eo amin'ilay mpilalao amboarina ihany koa. Manaova famaritana 1280x720 (miaraka amin'ny halavam-pandrefesana 640 pika). Arotsaka amin'ny endrika endrika toy ny JPG, GIF, BMP, na PNG.
10 Fomba ahazoana vola bebe kokoa ao amin'ny Youtube
Araho ireto hevitra 10 na mihoatra ireto mba hanampiana ny laharana amin'ny YouTube anao haka sary sy vola bebe kokoa avy amin'izy ireo.
⓵ Aza lany andro amin'ny fotoana handefasana horonan-tsary tsy misy votoaty mifandraika amin'ny fantsona Youtube izay anao.
⓶ Avereno ny anaram-peo miaraka amin'ny lohateninao, ampidiro ao amin'ny YouTube izany. Manorata famaritana mahaliana momba ireo teny 300 ho an'ny horonan-tsaryo ary apetaho amin'ny famaritana ny lohateninao.
⓷ Apetaho amin'ny anaram-boninahitra ny lohateninao. Ampiasao hatrany amin'ny anaranao ny fantsona fantsona. Manampy amin'ny fampisehoana ireo horonan-tsarinao amin'ny soso-kevitra izany ary aza adino ny manampy ireo marika lahatsary mifandraika amin'izany fa tsy maintsy mampiasa azy ireo amin'ny famaritana alohan'ny hampiasana azy ireo ho tag. Raha tsy izany dia hihevitra ho spamming izany.
⓸ Ampio ny rohy mihetsika vitanao sy ny pejy media sosialy rohy amin'ny famaritana. Mizarà horonantsary ao amin'ny Twitter na Instagram miaraka amin'ny tenifototra ary andramo manampy ny iray amin'ny tenanao mivalona koa.
⓹ Mitadiava lahatsary mifandraika amin'ny niche anao amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tag Twitter ary apetraho amin'ny fantsom-pifandraisana misy anao ary zarao miaraka amin'ny tag io trending io. Amin'ny fanaovanao izany dia misy voka-dresaka miely be ny horonan-tsary misy anao ary raha miely izy dia tena hahazo tombony bebe kokoa amin'ny fandefasana ireo horonan-tsary YouTube fotsiny. Mizarà ihany koa ao amin'ny Blogger, Reddit, Tumblr, Pinterest, Google Plus ary Facebook miaraka amin'ny tag.
⓺ Mitadiava lahatsary mivezivezy amin'ny Google Trends mifandraika amin'ny mitana ny toeranao ary manamboatra horonan-tsary ao aminy ary apetaho amin'ny fantsona. Amin'izany fomba izany dia manararaotra ny horonan-tsarinao ianao mba hahazoana viriosy ara-tsosialy.
⓻ Raha fantatrao ny momba ny marketing afrikana dia afaka manampy anao hahazo vola bebe kokoa amin'ny fantsona anao izy io. Misafidiana vokatra tsara mifandraika amin'ny faritry ny niche anao ary manapaha horonantsary misambotra eo amboniny ary mampakatra azy. Aorian'ny fametrahana mametaka ny rohy misy anao ao amin'ny famaritana voalohany ka raha misy olona manao ny toetrany hividy ny vokatrao dia afaka manaraka ny rohy mankany aminao izy mba hividy azy. Ka ny fifandraisana dia tena fomba lehibe hahazoana vola bebe kokoa.
⓼ Mifantoha amin'ny kalitao fa tsy be loatra ary ampiasao ny teny fanalahidy avoakan'ny cpc. Araho ireto torohevitra tsotra ireto mba hanamafisana ny fahitana ny fantsona misy anao hanampy anao hahazo bebe kokoa amin'ny YouTube.
⓽ Ny firenena mikendry tanjona dia hanana tahan'ny cpc tsara ary hahitana teny fanalahidy cpc avo lenta.
⓾ Nanamboara sary lakozia Youtube fakan-tsary mahazatra ho an'ny horonantsary mba hahitan'ny olona azy fa mahaliana. Raha tsy hainao ny manao raki-tsary YouTube mahazatra dia azonao atao ny mandika izany amin'ny horonan-tsary izay mahaliana sy mifandraika amin'ny horonantsary. Tsipika kely mahaliana no misarika ny sain'ny olona rehetra ary manery azy ireo hijery an'io horonantsary io. Ka aza hadio foana.
Tehirizo sary an-tsary sy vimeo sary an-tsarimihetsika amin'ny vava rehetra kalitao maimaim-poana. Ity fampiharana ity dia mamela anao misintona ankihavanana amin'ny kalitao rehetra. Apetaho fotsiny ny URL ny horonan-tsary amin'ny pejin-kaonty eto ambany ary tsindrio ny Fahazoan-tsary Sary.
Grabber amin'ny fakantsary YouTube tsara indrindra - Tehirizo Thumbnails Youtube Video
Misintona sary kely sary an-tsary youtube maimaim-poana amin'ny Full HD (1080), HD (720), SD ary koa amin'ny habeny kely. endrika efa anohanana izao: YouTube (HD, HQ, 1080p, 4K)
Asehoy ny fanohananao ary mizara ity tranonkala ity:
Nampiasa ity serivisy downloader pikantsary ity aho mba hamoronana efijery splash ho an'ny tetikadiko ho avy. Miadana ny fotoana toy izany, mety hamonjy ahy fotoana maharitra amin'ny ankapobeny ary miasa tsara.